युनिलिभरको नाफा घट्यो, अर्ब कमाउनेको सूचीबाट बाहिरियो
काठमाडौं । युनिलिभर नेपाल लि.को नाफामा गिरावट आएको छ । अघिल्लो आवको अन्त्यसम्ममा १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको सो कम्पनीले गत आवको अन्त्यसम्ममा करिब १६ करोड रुपैयाँ आम्दानी घटाएर ९६ करोडमात्रै नाफा गरेको हो । सो बैंकको शेयर पुँजी ९ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ...
रिडी हाइड्रोको यस्तो विवरण, प्रतिशेयर आम्दानी ५ पैसा !
कम्पनीले अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ कमाउँदै करिब ५ रुपैयाँको आम्दानी गरेको थियो । काठमाडौं । रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि. ले आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले गत आवको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै २ लाख ५३ हजार नाफा कमाएको विवरण पस्किएको हो । कम्पनीको हालको चुक्ता पूँजी ४७ करोड २२ लाख...
अरुण भ्यालीले बोलायो साधारणसभा, बोनससम्बन्धी यस्तो छ विशेष प्रस्ताव
काठमाडौं । अरुण भ्याली हाइड्रोपावरले आफ्नो बीसौँ साधारणसभा बोलाएको छ । कम्पनीले आगामी भाद्र ३० गतेलाई साधारणसभा बोलाएको हो । सो साधारणसभा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, स्टाफ कलेज, जावलाखेलमा हुने बताइएको छ । साधारणसभामा नियमित क्रियाकलापका अतिरिक्त सञ्चालक समितिको निर्वाचन र बोनस प्रस्ताव पनि अघि ल्याइएको छ । कम्पनीले...